Ogaden News Agency (ONA) – Shiinaha oo Mashaariic uu Itoobiya Kawada Joojiyay.
Shiinaha oo Mashaariic uu Itoobiya Kawada Joojiyay.
Waxa uu walaac xoogan soo wajahay dowlada Shiinaha oo sanooyinkii udu danbeeyey Itoobiya lacago dayn ah ku harqinaysay maalnagalinaysay.
Mashaariic waawayn oo ay Itoobiya ka dhisaysay sida mashruuca khadka tareenka, ee Itoobiya iyo Jabuuti isku xidha, mashruuca wadoowinka iyo kuwa badda kusaabsan oo ay kamid ahaayeen maraakiib iyo qalab Itoobiya waxkulasoo degto ayaa waxaa soo food saartay walaac ay kaqabto dhaqaalaha Itoobiya iyo say lacagtii kaga baxday mashaaricda Itoobiya uga soo ceshan lahayd.
Shiinaha ayaa Itoobiya siiyay lacag gaadhaysa 126 Bilyan oo doolar oo dayn ah waxa uuna lacaagtaas ugu talagalay in uu kufuliyo mashaariic waawayn oo larabay in faa’iido badan laga helo, hasayeeshee ururkii TPLF oo shiinaha heshiisyadan lagalay markuu meshii kabaxay Itoobiya qalalaso siyaasaded iyo mid dhaqaalo gashay waxa uu shiinuhu joojiyay mashariicdii uu waday waxaana kamid ah kuwa uu joojiy mid isku xidhayay Woldia iyo Maqale.
Xasilooni la’aanta siyaasadeed ee Itoobiya kataagan ayaa waxay kaslooni daro iyo walaac kuriday maalgashadeyaasha iyo dayn bixeyaasha caalamka gaar ahaan Shiinaha oo ah wadanka ugu maalgashiga badan Itoobiya waxaase muuqata inuu maafiyo wax amaahiyay meel banaana taaganyahay Shiinuhu.